Mitero yeRussia yekutengesa kunze inowedzera 2.5 nguva - China Foshan Hermes Simbi
Mitero yeRussia yekutengesa kunze inowedzera ka2,5 nguva
Russia yakawedzera mutero wayo wekutengesa kunze kwese kwese nesimbi neshanu nekaviri. Matanho emari achatanga kushanda kubva kupera kwaNdira kwenguva inosvika mwedzi mitanhatu. Nekudaro, tichifunga nezvezvino zviripo mbishi zvinhu, kuwedzera kwemitero hakuzotungamira mukumira kwakazara kwekutumira kunze kwenyika, asi kusvika padanho rakakura, kunotungamira mukudzikira kwemubhadharo wekutengesa kunze kwenyika. Mutengo wakaderera kwazvo wekutumira kunze ndeye 45 euros / ton panzvimbo pezvino 5% (ingangoita 18 euros / tani zvichibva pamitengo yemusika wepasi rose).
Sekureva kwenhau dzemapepanhau, kuwedzera kwemitero kuchakonzera kudzikira kukuru mumakero ekutengesa evatengesi, nepo mitengo yevatengesi ichawedzera kanokwana ka1.5. Panguva imwecheteyo, nekuda kwedanho repamusoro rezvinotaurwa pasi rose, zvinotarisirwa kuti huwandu hwesimbi inotumirwa kumisika yekunze haizodonhe zvakanyanya mushure mekunge mitemo mitsva yatanga kushanda (zvirinani muna Kukadzi). “Dambudziko rekuwanikwa kwezvinhu rakakomba zvikuru pamusika wesimbi. Turkey inogona kusangana nekushomeka kwemidziyo mbichana muna Kukadzi. Nekudaro, ini ndinofunga kuitiswa kwemutero uyu, kunyanya mumamiriro ekushomeka kwezvinhu, hakuzobvisa zvachose Russia semutengesi. Kunze kwezvo. Izvi zvichanetsa kutengeserana kweTurkey, "akadaro mutengesi weTurkey muhurukuro nevatori venhau.
Panguva imwecheteyo, sezvo vatengesi vepamusika vekunze vasina kusahadzika nezvekuzadzikiswa kwemitero mitsva, pakupera kwegore, mutengo wekutenga pachiteshi unozogadziriswa pa25,000-26,300 rubles / ton (338-356 US dollars / ton) CPT zviteshi, izvo zvinoita kuti zvibatsire kutengesa. , Uye kuwedzera mitero.